Inona ny tsy hahafoizanao ny vadinao na ny olon-tianao?
Nahoana no io olona miaraka aminao io no olon-tianao na vadinao fa tsy hafa ? Inona no tsy hahafoizanao azy, inona ny tombony hananany raha mihoatra ny hafa? Nanontaninay ny lehilahy ny hevitr’izy ireo mahakasika izany. Namaly izy ireo :
Te hanadino lehilahy tiana
Anisan’ny fanontaniana apetraky ny tovovavy vao nisaraka tamin’ny olon-tiany matetika ny hoe : ahoana ny atao hanadinoana azy ? Mankarary fo loatra mantsy ilay fisarahana ary mila adinoina izy. Tena tsy mora ny manadino olon-tiana. Hampahory anao tanteraka anefa raha tsy manapa-kevitra ny hanao izay tokony atao hanadinoana azy ianao.